Ahoana ny fahitan'ny angovo fikarohana, ny fandiavana ary ny fanondroana ny atiny? | Martech Zone
Tsy matetika no amporisihiko ny mpanjifa hanangana rafitra ecommerce na fitantanana votoatiny manokana noho ireo safidy fanitarana tsy hita maso izay ilaina amin'izao fotoana izao - mifantoka indrindra amin'ny fikarohana sy ny fanatsarana ara-tsosialy. Nanoratra lahatsoratra aho tamin'ny ny fomba hisafidianana CMS ary mbola asehoko izany amin'ireo orinasa hiarahako miasa izay alaim-panahy hanangana ny rafitra fitantanana votoatiny manokana.
Na izany aza, misy toe-javatra tanteraka izay ilana sehatra manokana. Rehefa izany no vahaolana tsara indrindra dia mbola manosika ny mpanjifako hanamboatra ireo fiasa ilaina aho hanatsarana ny tranonkalany ho an'ny fikarohana sy haino aman-jery sosialy. Misy endri-javatra telo lehibe indrindra izay ilaina.
Inona ny rakitra Robots.txt?
robots.txt rakitra - ny robots.txt Ny rakitra dia rakitra an-tsoratra tsotra izay ao amin'ny lahatahiry root an'ny tranokala ary milaza amin'ireo motera fikarohana izay tokony hampidirin'izy ireo sy tsy ekena amin'ny valin'ny fikarohana. Tao anatin'izay taona lasa izay, nangataka koa ny motera fikarohana mba hampidiranao ny lalana mankany amin'ny sitemap XML ao anaty fisie. Ity misy ohatra iray momba ahy, izay ahafahan'ny bot rehetra mandady ny tranokalako ary mitarika azy ireo ihany koa amin'ny sitemap XML-ko:
Inona no atao hoe tranokala XML?
XML Sitemap - Tahaka ny HTML natao hijerena anaty browser, ny XML dia soratana mba ho levona amin'ny programa. Ny sitemap XML dia latabatra isaky ny pejy amin'ny tranokalanao amin'ny ankapobeny ary oviana no nohavaozina farany. Ny sitemap XML dia mety ho rojovy amina rojo vy… izay XML Sitemap iray dia afaka manondro iray hafa. Tsara izany raha te handamina sy handrava ireo singa ao amin'ny tranokalanao lozisialy (FAQ, pejy, vokatra, sns.) Ao amin'ny tranokala misy azy ireo manokana.
Ilaina ny tranokala mba hahafahanao mampahafantatra tsara an'ireo motera fikarohana izay atiny noforoninao sy ny fotoana nanovana azy farany. Ny fomba ampiasain'ny motera fikarohana rehefa mandeha any amin'ny tranokalanao dia tsy mandaitra raha tsy mampihatra sitemap sy sombin-tsoratra.
Tsy misy XML Sitemap, atahoranao tsy ho hita intsony ny pejinao. Ahoana raha manana pejy fidinana vokatra vaovao ianao izay tsy mifamatotra anatiny na ivelany. Ahoana no ahitan'i Google azy? Ataovy tsotra fotsiny… mandra-pahita rohy aminy dia tsy ho hita ianao. Soa ihany fa ny motera fikarohana dia ahafahan'ny rafi-pitantanana atiny sy ny sehatra ecommerce hanakodia karipetra mena ho azy ireo!
Google mahita rohy ivelany na anatiny mankany amin'ny tranokalanao.
Google dia manisa ny pejy ary mametraka azy io arakaraka ny atiny sy ny atiny sy ny kalitaon'ny tranokala manondro.
Miaraka amin'ny tranokala XML, tsy avelanao ho azy ny fahitana ny atiny na ny fanavaozana ny atiny! Betsaka ny mpamorona no manandrana maka hitsin-dàlana izay mandratra azy ireo koa. Mamoaka sombin-javatra manan-karena mitovy amin'ny tranokala izy ireo, manome fampahalalana izay tsy misy ifandraisany amin'ny fampahalalana momba ny pejy. Mamoaka sitemap misy daty mitovy amin'ny pejy rehetra izy ireo (na havaozina daholo izy ireo rehefa manavao pejy iray), manome filaharana amin'ireo motera fikarohana fa milalao ny rafitra na tsy azo atokisana izy ireo. Na tsy apetany mihitsy ny motera fikarohana… ka tsy tsapan'ny motera fikarohana fa misy vaovao vaovao navoaka.
Inona ny Metadata? Microdata? Snippets manan-karena?
Ny sombin-tsoratra manan-karena dia voamarika tsara microdata miafina amin'ny mpijery izany fa hita amin'ny pejy hampiasain'ny motera fikarohana na tranokala sosialy. Fantatra amin'ny hoe metadata. Google dia mifanaraka amin'ny Schema.org ho toy ny fenitra amin'ny fampidirana zavatra toy ny sary, lohateny, famaritana… ary koa ny sombin-tsipelina fampahalalana hafa toy ny vidiny, habetsahana, fampahalalana ny toerana, naoty, sns. amin'ny alalan'ny.
Facebook dia mampiasa ny OpenGraph protokol (mazava ho azy fa tsy hitovy izy ireo), ny Twitter aza dia manana sombin-tsoratra hamaritana ny piraofilinao Twitter. Mihabetsaka ny sehatra mampiasa an'ity metadata ity hijerena mialoha ireo rohy tafiditra sy vaovao hafa rehefa mamoaka izy ireo.
Ny pejin-tranonkalanao dia misy heviny miafina izay takatry ny olona rehefa mamaky ireo pejin-tranonkala izy ireo. Saingy ny motera fikarohana dia manana fahatakarana voafetra momba izay resahina ao amin'ireo pejy ireo. Amin'ny fampidirana marika fanampiny amin'ny HTML an'ny pejin-tranonkalanao — tag izay milaza hoe, “Ry motera fikarohana, ity fampahalalana ity dia mamaritra ity sarimihetsika manokana ity, na toerana, na olona, ​​na horonan-tsary” —dia afaka manampy ireo motera fikarohana sy fampiharana hafa hahatakatra tsara kokoa ny atiny ianao ary asehoy amin'ny fomba mahasoa sy mifandraika. Microdata dia andian-tag, nampidirina HTML5, ahafahanao manao an'io.
Schema.org, Inona ny MicroData?
Mazava ho azy, tsy misy amin'ireto takiana ireto… fa tena mamporisika azy ireo aho. Rehefa mizara rohy ao amin'ny Facebook ianao, ohatra, ary tsy misy sary, lohateny na famaritana miakatra… vitsy ny olona liana ary tena manindry. Ary raha tsy ao amin'ny pejy tsirairay ny sombin-tsoratry ny Schema anao, mazava ho azy fa mbola afaka miseho amin'ny valin'ny fikarohana ianao… fa mety handresy anao ny mpifaninana rehefa manana fampahalalana fanampiny aseho izy ireo.
Soraty amin'ny tranokala fikarohana ny XML Sitemaps anao
Tsy maintsy atao izany, raha nanamboatra ny atiny na sehatra ecommerce anao ianao, fa manana subsystem izay manaparitaka ny motera fikarohana ianao, mamoaka microdata, ary avy eo manome sitemap XML manan-kery hahitana ny atiny na fampahalalana momba ny vokatra!
Raha vantany vao namboarina sy namboarina manerana ny tranokalanao ny rakitra robots.txt, sitemap XML ary sombin-javatra manadanja anao, aza adino ny misoratra anarana ho an'ny Search Console (izay fantatra koa amin'ny hoe Webmaster tool) izay ahafahanao manara-maso ny fahasalamanao tranokala amin'ny motera fikarohana. Azonao atao aza ny manondro ny lalan'ny Sitemap anao raha tsy misy lisitra ary jereo ny fomba lanin'ny motera fikarohana azy, na misy olana izany na tsia, ary na ny fomba fanitsiana azy ireo aza.
Atsofohy amin'ny karatra fikarohana sy haino aman-jery sosialy ny karipetra mena dia ho hitanao fa tsara kokoa ny toeran'ny tranokalano, ny tsanganana amin'ny pejy valin'ny motera fikarohana dia voatsindry bebe kokoa, ary ny pejinao dia nizara bebe kokoa tamin'ny media sosialy. Miampy daholo izany!
Ahoana no iarahan'ny Robots.txt, Sitemaps, ary MetaData
Ny fampifangaroana ireo singa rehetra ireo dia toy ny fanalana ny karipetra mena ho an'ny tranonkalanao. Ity ny fizotry ny fandehanana izay alain'ny bot miaraka amin'ny fanoratan'ny motera fikarohana ny atiny.
Ny tranokalanao dia manana rakitra robots.txt izay manondro ny toerana XML Sitemap anao ihany koa.
Ny CMS na ny rafitra ecommerce anao dia manavao ny Sitemap XML miaraka amin'ny pejy rehetra ary mamoaka daty na manova ny fampahalalana momba ny daty.
Ny CMS na ny rafitra ecommerce anao dia manaparitaka ny motera fikarohana hahafantarana azy ireo fa nohavaozina ny tranokalanao. Azonao atao ny manisy ping azy ireo mivantana na mampiasa RPC sy serivisy toy izany Ping-o-Matic manosika ny milina fikarohana rehetra.
Miverina avy hatrany ny Search Engine, manaja ny rakitra Robots.txt, mahita pejy vaovao na nohavaozina tamin'ny alàlan'ny sitemap, ary avy eo manondro ny pejy.
Rehefa manondro ny pejinao izy dia mampiasa microdata sombin-javatra manankarena hanatsarana ny pejy valin'ny motera fikarohana.
Toy ny tranokala hafa mifandraika amin'ny atiny, milahatra tsara kokoa ny atiny.
Rehefa zaraina amin'ny haino aman-jery sosialy ny atiny, ny fampahalalana momba ny sombin-javatra voatanisa dia afaka manampy amin'ny fomba tsara hijerena ny atiny ary hitarika azy ireo amin'ny mombamomba anao.
Tags: ecommerce manokanaahoana nofifanarahanafisie robots.txttetikaconsolefenitra sitemapsitemap xml
3 Novambra 2020 à 3:47
Ny tranokalako dia tsy afaka manisy votoaty vaovao, maka sitemap sy urls amin'ny webmaster aho fa mbola tsy afaka manatsara izany. Google backend ve no olana?
3 Novambra 2020 à 7:50
Tsy amin'ny ankapobeny, inona ny sehatra misy anao? Manana fitaovana azoko anadihadiana ny tranokalanao aho.